Gudoomiyihii gobol oo Shil Gaari ku Geeriyooday – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyihii gobol oo Shil Gaari ku Geeriyooday
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in goordhow uu Shil Gaari uu ku dhintay Gudoomihii gobolka Sool ee maamul goboleedka Puntland.
Shilka ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Magaalada Garoowe iyo sidoo kale degmada Laascaanood.
Allaha u naxariistee Muqtaar Mahad ayaa Gaarigii uu watay Shil ku Galay sidaasina ku geeriyooday.
Sidoo kale Waxaa la sheegaya in uu jiro dhaawac soo gaaray dadka la socday Gaari uu saarnaa gudoomiyaha.
Maxamed Cumar Xagafey oo goordhaw lagu dilay Weerar ka dhacay Muqdisho